Ebufe orylọ ọrụ, Ndị na - ebunye ya - Ndị na-ebufe China
Onye na-akpụcha ihe na-ebu isi, akụkụ ahụ dị n'etiti, ọdụ ọdụ, eriri ihe eji ebu ihe, ngwaọrụ ịkwọ ụgbọ na ntinye ụra. Ofụri Esịt mechiri emechi Ọdịdị, ọ dịghị ihe leakage n'oge ọrụ; ebu yinye adopts igwe yinye, otu yinye layout ụdị; mbubata na mbupu nke akụrụngwa, na-ebu ogologo nwere ike ịhazi ya ma hazie ya dịka usoro achọrọ.
The dayameta nke LS ụdị ịghasa ebu bụ 100 mm- The kacha ogologo nke otu mbanye ịghasa igwe nwere ike iru 40m (oversize 30m). Ugboro abụọ mbanye ịghasa igwe adopts Ọdịdị nke na etiti gbajiri aro, na kacha ogologo nwere ike iru 80m (ibu nnukwu 60m).
SCG usoro ogologo-elu-okpomọkụ ihe onwunwe vibration ebu na ọtụtụ-eji na Ngwuputa, nkà mmụta banyere ígwè, ụlọ ihe, unyi, chemical ụlọ ọrụ, ọka, na nkà mmụta ọgwụ na ndị ọzọ ọrụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru 300 ℃ maka ụdị ntụ ntụ, granular, ngọngọ na ngwakọta ha.